အနာဂါတ်ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ လူပျို/အပျိုရည်ကို Sex Robot များဖြင့်ကုန်ဆုံးစေတော့မည် – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 962 Views
အနာဂါတ်ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ လူပျို/အပျိုရည်ကို Sex Robot များဖြင့်ကုန်ဆုံးစေတော့မည်
U Min Thant Jun 10, 2016
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ရုပ်တွေထွက်ပေါ်လာတာဟာ လူငယ်တွေရဲ့ ‘ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်မှု’ တွေကို ရပ်တန့်စေပြီး အနာဂါတ် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွက် ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ စက်ရုပ်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခတွေက သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အနာဂါတ်မှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ လူပျို/အပျိုရည်တွေကို Sex Robot တွေနဲ့ ကုန်ဆုံးသွားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းချက်တွေအရ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရှက်ဖီးလ်တက္ကသိုလ်၊ ပါမောက္ခ Noel Sharkey က ချယ်လ်တန်ဟမ် သိပ္ပံပွဲတော်မှာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ရုပ်တွေဟာ ဒီအချိန်ကနေ လာမယ့် ၁၀နှစ်အတွင်းမှာ အလွန်ကျော်ကြားလာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အသက်အကန့်အသတ်နဲ့ ဒီစက်ရုပ်တွေကို ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဒါဟာ စိတ်မချရပါဘူး” လို့သူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“စက်တွေနဲ့ လိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်တာဟာ ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်၊ ပထမဆုံး ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ? အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် သင့်အနေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကိုဘယ်လို ထင်သွားမလဲ? ယောက်ျား၊ မိန်းမ ဆိုတာကို ဘယ်လိုတွေးမိမလဲ၊ အဲ့ဒီအရာကို တကယ်လို့ ထင်မိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုရင် သာမန်လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်တာကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်” လို့သူက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အညီ လူတွေနဲ့ စက်ရုပ်တွေ ချစ်ကြိုးသွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုမိုများပြားလာတာကို Ex Machina လိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
စက်ရုပ်တွေရဲ့ Artificial Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ သိဥာဏ်တု နည်းပညာတွေဟာ လူတွေနဲ့ ပိုမိုနီးစပ်မှုရှိလာသလို ဆက်ဆံရေး ပိုမိုချောမွေ့ပြေပြစ်လာမှုတွေကြောင့် စက်ရုပ်နဲ့လူတွေရဲ့ အချစ်ကိစ္စတွေ၊ လက်ထပ်တာတွေလည်း ရှိလာနေပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျား၊မ စက်ရုပ်တွေဟာ သုံးစွဲသူတွေကို ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်တည်ဆောက်ထားတာကြောင့် တကယ့်လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ပြီးမြောက်နိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းနည်းတာတွေ ဖြစ်လာတတ်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗြိတိန်မှာရှိနေတဲ့ လူလေးယောက်မှာ တစ်ယောက်ဟာ စက်ရုပ်တွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရတာကို နှစ်သက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်မှာခေါက်ပြီး ပတ်ထားလို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကို Lenovo မိတ်ဆက်
ဖုန်းဒီဇိုင်းကို လိုသလိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ မော်ဂျူလာစမတ်ဖုန်းအသစ်ကို Motorola မိတ်ဆက်
31 shares9 views
328 shares98 views